विदेशमा हुनुहुन्छ ? यी कुरा ख्याल गर्नुभएन भने जेल सजाय हुन सक्छ - NA MediaNA Mediaविदेशमा हुनुहुन्छ ? यी कुरा ख्याल गर्नुभएन भने जेल सजाय हुन सक्छ - NA Media
म कुलप्रसाद कार्की, साउदी अरबमा ११ वर्ष काम गरेर आएको हुँ । हाल प्रवासी समन्वय समिति (पीएनसीसी) मा आवद्ध छु । यसको अध्यक्षता गरिरहेको छु ।
परिचयपत्र पनि अर्को अनिवार्य कुरा हो । परिचयपत्र, भिसा भएन भने जेल पर्न सकिन्छ । वैधानिक परिचयपत्र बोकेर हिँडिएन भने त्यहाँको प्रहरीले समात्न सक्छ । यस्तै कम्पनी छाडेर भाग्यो भने पनि जेल परिन्छ । त्यसैले परदेशमा अवैधानिक हैसियतमा काम गर्न हुँदैन । अथवा यहाँबाट करार गरेर गएको कम्पनी छाड्न हुँदैन ।
त्यस्तै सार्वजनिक स्थान बाहेक त्यहाँको नागरिकको घरभित्र प्रवेश गरेमा र कसैले देखेर उजुरी गर्यो भने पनि जेल पर्ने सम्भावना छ । धर्मको बारेमा वादविवाद गर्न पनि खाडी देशहरुमा निषेध गरिएको छ । त्यस्तो गर्न पाईंदैन । कसैले धर्मको विषयलाई लिएर वादविवाद गरेको खण्डमा त्यसलाई कडा कारबाही हुन्छ ।